ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : သေနေ့ အလှူ
Monday, November 05, 2012 အိမ့်သံစဉ် No comments
၂.၁၁.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့နံနက်နေထွက်သည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်တော့်၏တယ်လီဖုန်းနှင့် ကွန်ပြူတာ (အင်တာနက်စာမျက်နှာ) ထက်တွင် ကျွန်တော့်မွေးနေ့အား ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ခြင်းတို့ လွှမ်းခြုံခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါသည်။ ၂.၁၁.၂ဝ၁၂ရက်နေ့သည် ကျွန်တော်(၅၃) နှစ်ပြည့်သော မွေးနေ့အခါ သမယတွင် နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ အသင်းသူ/သားများသည်၎င်း၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများသည်၎င်း၊
ပြည်ပမှ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း၊ Blogger များသည်ပင် ကျွန်တော့်အား မွေးနေ့ပွဲမလုပ်ဘူးလား ? ဘာကျွေးမှာလဲ ? စသဖြင့် မေးမြန်းကြသည်။
ကျွန်တော်ပြည်ပမှပြန်ရောက်သည်မှာ (၂)ရက်ခန့်သာဖြစ်သောကြောင့် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) တွင် တွေ့ဆုံရမည့်သူများ၊ မိမိလုပ်ကိုင်ရမည့် အသင်းတာဝန်ကိစ္စရပ်များနှင့် (၅)နှစ်တာကာလ ဝေးကွာ ခဲ့သော ကျွန်တော်၏သမီး မြင့်မိုရ်ဦးတို့ ဇနီးမောင်နှံနှင့် ကျွန်တော်၏မြေးငယ်နှစ်ယောက်တို့နှင့်
ပြန်လည် ဆုံတွေ့နေသောကြောင့် မိမိ၏မွေးနေ့မွေးရက်ကိုပင် သတိမထားမိခဲ့ချေ။
ယခင့်ယခင်နှစ်များတွင် ကျွန်တော်၏ မွေးနေ့မွေးရက်၌ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် မိမိ ကျင်လည် ခဲ့သော ရုပ်ရှင်လောကအချိန်တွင် သရုပ်ဆောင်မင်းသားအဖြစ် ဝတ်ဆင်မြန်း ခဲ့သော အဝတ်အထည် များအား မဲဖောက်၍ ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်အားပေး လူမှုရေးသမားများအား ဝေငှ ကုသိုလ်ဒါနပြုခြင်း၊ အကျွေး အမွေးဒါနပြုခြင်း၊ ဇနီး ရွှေဇီးကွက်နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မုန့်လုပ်ကာ ဒါနပြု ကျွေးမွေးခြင်း စသည့် ကုသိုလ်ရေးများကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
သို့သော် ယခုမွေးနေ့ရက်တွင် နံနက်အိပ်ယာထထချင်း မွေးနေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြသော တယ်လီဖုန်းသံများ၊ အင်တာနက်မှပို့သသော မွေးနေ့ဆုတောင်းများကို တွေ့ရှိခံစားမိကာမှ ကျွန်တော်၏ အသက် (၅၃)နှစ်မွေးနေ့ရက်ဖြစ်ကြောင်း သတိထားမိသည်။
သို့သော် အသင်းသူ/သားများအား ကျွေးမွေးဧည့်ခံကုသိုလ်ယူမည့် ကိစ္စရပ်များအား အချိန်မီ (ချက်ခြင်း) မစီစဉ်နိုင်ခဲ့ချေ။ ကျွန်တော်၏ ထမ်းဆောင်နေရသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တာဝန်များဖြင့် မအားမ လပ်ဖြစ် နေရသည်။
ထိုနေ့ နံနက်(၁းဝဝ)နာရီအချိန်တွင်လည်း ကျွန်တော်အိပ်ယာမှ ဆတ်ခနဲ နိုးလာ သည်။ အိပ်ယာနိုး၍ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း တယ်လီဖုန်းသံမြည်လာသည်။ ဤအချိန်တွင်မည်သူကများ ဖုန်းဆက်သနည်းဟု
တွေးတောမိကာ တယ်လီဖုန်းအားကောက်ကိုင်လိုက်သောအခါ “ဦးကျော်သူရေ … ကျွန်တော် ဦးမောင်ညွန့်ရဲ့သားပါ။
အဖေတော့ဆုံးသွားရှာပြီ။” ဟူ၍စတင်ကြားရတော့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ကျွန်တော်၏ မွေးနေ့ဖြစ်သော နံနက်အစောပိုင်း (၁းဝဝ)နာရီအချိန်တွင် ကျွန်တော့်ထံသို့ အစောဆုံးဖုန်းဆက်၍ နာရေးသတင်းအား ကျွန်တော်ကြားသိရခြင်းသည် “မွေးနေ့တွင် သေနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ရန်”ဟူ၍ သတိပေးနှိုးဆော်ခြင်း တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်တော့သည်။
ဦးမောင်ညွန့်သည် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် လုပ်အားပေးနေသော ဝါရင့် လူမှုရေး သမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဦးမောင်ညွန့်သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် သစ္စာရှိစွာ၊ စည်းကမ်းရှိစွာဖြင့် အများပြည်သူတို့အတွက် ပေးဆပ်နေသောလူမှုရေးသူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် ဦးမောင်ညွန့်၏ နာရေးကိစ္စရပ်အား အသင်းမှကူညီမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် အသင်းသူ/ သားများအား ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။ ကျွန်တော်၏မွေးနေ့ဖြစ်သော (၂.၁၁.၂ဝ၁၂) ရက်နေ့ နေ့လည် အချိန်တွင် ထူးခြားမှုဖြစ်သော နာရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ထိုနာရေးလမ်းကြောင်းသည် ကျိုက္ကဆံရဲဝင်းရှိရဲရိပ်သာ၊ တိုက်အမှတ်၂ဝ၊ အခန်း(၄) နေအိမ်တွင်
ရဲရိပ်သာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူ အချုပ်ကားမောင်းနှင်သည့် ဦးမြင့်ဇော်နေအိမ်သို့ ဦးမြင့်ဇော်၏ညီဖြစ်သူ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုးမိတ်မြို့နေ ဦးအောင်မင်း၊ ဇနီးမပူစူးတို့နှင့်အတူ ရင်သွေးငယ် မောင်နှမ သုံးယောက် တို့သည် ရက်တစ်ပါတ်ခန့်က ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
မိသားစုဝင်များသည် ရန်ကုန်မြို့သို့မရောက်ခင် မန္တလေးမြို့တွင် သမီးဖြစ်သူ မမိုးမိုးထံတွင် ငှက်ဖျား
ဝေဒနာကို ခံစားလာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိသောအခါ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးမြင့်ဇော်နေအိမ် တွင် နေထိုင် ရင်း ခံစားနေရသော ငှက်ဖျားဝေဒနာအား နီးစပ်ရာဆိုင်များမှ ဆေးမှီးတိုများဖြင့် သာကုသ ခဲ့သည်။
သို့ရာတွင်ဝေဒနာပြင်းထန်စွာခံစားနေရသောကြောင့် ရဲဝင်းအတွင်းရှိ ရဲမိသားစုဝင်များမှ စုပေါင်း အကူငွေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးသို့ သမီး မမိုးမိုး အသက်(၁ဝ) နှစ်နှင့် သားငယ်
မောင်သားငယ် အသက်(၅) နှစ်တို့အား လက်ဆွဲ၍ မိခင်ဖခင်တို့သည် သွားရောက် ကုသရန်
ဆေးရုံသို့ရောက်ရှိသောအခါ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များမှ မမိုးမိုး၏ ဦးနှောက်ထဲသို့ ရောက်ရှိနေသော ငှက်ဖျားပိုး အားကုသရန် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် မမိုးမိုးသည် ရုတ်တရက်ဇက်ကျိုးကျကာ ဘဝတစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားတော့သည်။
အစ်မဖြစ်သူ မမိုးမိုး အသက် (၁ဝ) နှစ်သည် ကွယ်လွန်သွားရှာပြီး (၅)မိနစ်ခန့်အတွင်း မိဘများနှင့် အတူ လက်ဆွဲ၍ လမ်းလျှောက်ပါရှိလာသော မောင်လေးတစ်ယောက်သည် အစ်မဖြစ်သူဇက်ကျိုး၍သေဆုံး သွားသည်ကို မြင်တွေ့ပြီး မောင်သားငယ် အသက်(၅)နှစ်သည်လည်း အစ်မဖြစ်သူ မမိုးမိုးသွားရာနောက်သို့ လိုက်ပါသွားတော့သည်။
မိနစ်ပိုင်း စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း မိဘများဖြစ်သူ ဦးအောင်မင်း၊ မပူစူးတို့အား သမီးငယ်နှင့် သားငယ်တို့ သည် နှုတ်မဆက်ဘဲ ကမ္ဘာမြေပြင်မှ ထွက်ခွာသွားတော့သည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှလုပ်အားပေးဖြစ်သူမစန်းစန်းနွယ်မှ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ အကြောင်းကြား အကူညီတောင်းမှုကြောင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ အသင်းသူ/သားများ၊ ဝန်ထမ်းများတို့သည် မြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကာ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်နှစ်စီးဖြင့် သယ်ဆောင်၍ ရေဝေးသုဿန်သို့ကူညီပို့ဆောင် သင်္ဂြိုလ်ပေးခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်အား မွေးနေ့ရှင် ကျွန်တော်သိရှိသောအခါ ကျွန်တော်၏မွေးနေ့ဖြစ်သော … ကျွန်တော် ကမ္ဘာမြေပြင် သို့ရောက်ရှိခဲ့သောနေ့ရက်တွင် ကမ္ဘာ့မြေပြင်မှမထင်မှတ်ဘဲထွက်ခွာသွားရရှာသော သားငယ် သမီးငယ်၊ မောင်နှမနှစ်ဦးတို့အား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ သင်္ဃန်း(၂)စုံနှင့်အတူ ကျန်ရစ်သူ ချို့တဲ့အားငယ်နေသော မိသားစုဝင်များနှင့် ယင်းမိသားစုဝင်တို့အား ကူညီစောင့်ရှောက်နေ ထိုင်ခွင့်
ပေးခဲ့သော ကျိုက္ကဆံရဲရိပ်သာနေ အချုပ်ကားမောင်းနှင်သူ ကိုမြင့်ဇော် မိသားစုတို့အား လူသားချင်း စာနာစိတ်ဖြင့် ကျွန်တော်၏ ကိုယ်ပိုင်ငွေထဲမှ သားငယ် မောင်သားငယ်၊ သမီးငယ် မမိုးမိုးတို့အား ရည်စူး၍ အလှူငွေ(ငါးသောင်း)ကျပ်နှင့် ကိုမြင့်ဇော်မိသားစုတို့အား အလှူငွေ(နှစ်သောင်း)ကျပ်တို့အား လှူဒါန်းမှု ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ယနေ့(၃.၁၁.၂ဝ၁၂)ရက်နေ့ နေ့လည် (၁းဝဝ)နာရီအချိန်တွင် လူမှုရေးသူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမောင်ညွန့် အသက်(၇၃)နှစ်၏ ဈာပနအခမ်းအနားအားလည်းအသင်းသူ/သားများ၊ ဝန်ထမ်းများတို့ဖြင့် စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာဖြင့် နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခရီးအား အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
ကျွန်တော်သည် အသက်(၅၃)နှစ်သို့ ရောက်ရှိသည်နှင့်အညီ လူ့ဘဝသက်တမ်းအား မည်မျှနေထိုင် ရဦးမည်ကို မခန့်မှန်းနိုင်၊ မတွက်ချက်နိုင်။ ထို့ကြောင့် မိမိနေထိုင်ခွင့်ရရှိသည့် စက္ကန့်၊ မိနစ်၊ နာရီ၊
နေ့ရက်များတွင် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများနှင့်သာ ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လိုတော့သည်။
ထို့ကြောင့် မိမိ၏ မွေးနေ့အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သော ကောင်းမှုများအား မိမိဘဝတစ်ပါးသို့ ပြောင်းလဲရမည့်နေ့၊ မိမိသေဆုံးရတော့မည့်အချိန်၊ မိမိကမ္ဘာမြေပြင်မှ ထွက်ခွာရတော့မည့် နေ့ရက်များအားရည်စူး၍ ယခု ကဲ့သို့သော လက်တွေ့ကျသောလုပ်ရပ်များ၊ သဘာဝကျသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများ၊ သီလ လုံသော
ပေးဆပ်မှုများဖြင့်သာ ကျင်လည်နေထိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်၏ မွေးနေ့ (၅၃)နှစ်တွင်
သေနေ့အတွက် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အများပြည်သူအပေါင်းတို့အားအသိပေး၊ သတိပေးစကား ဆိုလိုက်ရပါတော့သည်။
( ထိုနေ့ ညဖက်တွင် ကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးမိခင်၊ဖခင်တို့ အားမိသားစု နှင့်အတူသွားရောက် ကာ ကာယကံ၊၀ဇီကံ၊မနောကံတို့ နှင့်ပစ်မှားထားသည်ရှိပါက ခွင့်လွှတ်ပါရန် မြတ်စွာဘုရားအားဦးထိပ်ပန်ဆင် လက်အုပ်ချီမိုး ကန်တော့ခဲ့ပြီး မွေးနေ့ည ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ ပါတော့သည်။
မွေးနေ့ ပြီးလျှင် သေနေ့ လာမည်မဟုတ်ပါလား ။
ကျော်သူ(၁၉၅၉ မှ ၂၀ ? ? )